बिदेशिएका नेपालीको आक्रोस - Vishwa News
बिदेशिएका नेपालीको आक्रोस
मिनबहादुर पण्डित (दुबई)
घर परिवार बाट टाडा २० बर्ष बिदेश बसेर अरबको तातो गर्मीमा काम गरी खाइ नखाइ बनाएको जम्मा एउटा घर छ । त्यसमा पनी नगरपालिका कर, तिरो आदि बाहेक १०५ मासिक घर बाहाल कर पनि तिर्नु पर्ने रे । तिर्छु यदी मैले तिरेको पैसाले देश विकास हुन्छ भने । तिर्छु यदी मैले तिरेको कर भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टि हुन्छ भने । मेरो घर अगाडी सडकमा परेको खाल्टो सरकारले पुरिदिन्छ भने । तिर्छु यदी मेरो घरमा बर्खामा ढल भरिएर पानी पस्न रोकिन्छ भने । मेरो घर अगाडीको फोहोर उठाऊन मैले निजी कम्पनीलाई पैसा नतिरी नगरपालीका नै फोहोर लिन आउँछ भने । फोहोर पानीका कारण बिरामी हुँदा हस्पिटलमा लागेको हजारौं खर्च सरकारले तिरी दिन्छ भने । तिर्छु यदी खाने पानीको बिल तिरे पछी जारको पानी किनेर खान पर्दैन भने । तिर्छु यदि मेरो घरमा भाड़ा नतिरी भाग्ने डेरावालालाई सरकारले समाई दिन्छ भने । तिर्छु यदी मैले घर बनाउँदा लिएको बैंकको लाखौ ऋणमा १०५ थपेर सरकारले साँवा, ब्याज तिरि दिन्छ भने । तिर्छु यदी मैले तिरेको १०५ करको भार तिनै मजदूरी गरेर खाने डेरा वालाको थाप्लोमा थपिन्न भने । तिर्छु यदी मेरो घर भूकम्पले भत्कीदा सरकारले बनाई दिन्छ भने । तिर्छु यदी मेरो अरु आम्दानी नहुँदा र घर बाहालले नपुग्दा मेरो बच्चाको फी सरकारले तिरीदिन्छ भने । त्यहि घरको निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिन नगरपालिकालाई तिरेको एक लाख ऋण सरकारले तिरि दिन्छ भने । चाडबाड र बिहे ब्रतबन्ध खर्च घर बाहालबाट जोगाएर राख्न नपरी सरकारले ब्यहोर्छ भने । म र मेरो श्रीमती काम गर्न नसक्ने उमेरमा बिरामी हुँदा सरकारी अस्पतालमा सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले नै ब्यहोर्छ भने । माथी उल्लेखित मध्य कुनै सुविधा सरकारले दिन सकेको छ ?
मानौ महिनाको ५ हजार घर बाहाल आयो । त्यतीले काठमाँडौको महँगीमा घर खर्च एक छेउ पनि पुग्दैन । अनि ५ हजार कर चाहीं कहाँ बाट ल्याएर तिर्ने ? कर लिने भनेको त खर्च कटाएर बचेको मुनाफामा हो । सम्पूर्ण आम्दामीमा कर लाउनु जायज हुदैं होईन । केको लागी लिने १०५ कर ? अनि किन तिर्ने कर ? हामी जनता करदाता र मतदाता मात्र थियौ, अब त सरकारलाई अन्नदाता पनि भयौ । बिदेशी दाताले दिएको दानले नपुगेर जनतालाई पनि पो दाता बनाईयो त । अब सास फेरेको हिसाबले ‘स्वासप्रसास कर’ लिन पनि बेर छैन । यो एक जनाको मात्र होईन, यो त रोजगारीका लागि बिदेशिने आम नेपाली ब्यथा हो । कहिले सम्म भोग्नुपर्ने यस्तो ब्यथा ?